Superfoods ကိုမင်းရဲ့အစားအစာထဲမှာထည့်သွင်းသင့်တယ် Bezzia
တောရက်စ် | 14/09/2021 20:00 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
အာဟာရနှင့်အစားအစာနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်၊ အရာအားလုံးကိုရေးထားသည်ဟုသင်ဘယ်သောအခါမျှမပြောနိုင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ နေ့စဉ်နှင့်အမျှသုတေသနနှင့်လေ့လာမှုအသစ်များသည်အစားအစာနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ဒါတွေကငါတို့ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲမရ။ စားသုံးမိသောအရာတိုင်းသည်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းသက်သေပြသည်။ အချို့အစားအစာများသည်ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေသည့်နည်းတူအခြားသူများသည်အထူးသဖြင့်၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။
အချို့အစားအစာများတွင်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေသောအရာများနှင့်အာဟာရများပါ ၀ င်သည်။ ဗိုင်းရပ်စ်၊ ဘက်တီးရီးယားနှင့်ရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုကာကွယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဤအစားအစာများကို "superfoods" ဟုခေါ်ပြီး၎င်းတို့ကိုအစားအစာထဲသို့ပုံမှန်ထည့်သွင်းသည်။ သင့်ကိုပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေပြီးအတွင်းပိုင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်.
2 သင့်အစားအစာတွင်ရှိသင့်သော superfoods များ
2.1 Acai ဘယ်ရီသီး
2.3 Matcha လက်ဖက်ရည်
၎င်းတို့သည်ယခုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းခေတ်စားလာသည်ဆိုသော်လည်း superfood များသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်တော့ပါ။ အဲဒါပိုတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မြေထဲပင်လယ်အစားအစာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်နေသောအစားအစာများဖြစ်သည်သံလွင်ဆီလိုမျိုးပေါ့။ သို့သော် superfood ဟုလူသိများသောအရာအများစုမှာအစေ့များ၊ ဘယ်ရီသီးများနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောအစားအစာများဖြစ်သဖြင့်၎င်းသည်လူအများစုကိုအထူးအဆန်းဖြစ်စေသည်။
superfood ဟူသောဝေါဟာရသည်သူ့၌သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမရှိသော်လည်း၎င်း၏အနှစ်သာရမှာထိုအခွင့်ထူးစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအစားအစာများ၏အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပတ်သက်၍ အတော်လေးလက်တွေ့ကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ superfood များသည်အစားအစာများဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် မြင့်မားသောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသောအာဟာရတန်ဖိုးမြင့်မားသည်ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ၊ ဗီတာမင်များ (သို့) ကျန်းမာသောအဆီကဲ့သို့။
သင့်အစားအစာတွင်ရှိသင့်သော superfoods များ
superfoods များစာရင်းသည်ပိုကျယ်ပြန့်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းတို့သည်အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးရေးမှရသည့်ထုတ်ကုန်များအထိကျယ်ပြန့်လာပြီးကုမ္ပဏီများသည်သဘာဝနှင့်ကျန်းမာဆုံးအစားအစာများကိုထောက်ခံအားပေးနေကြသည်။ ယခုအခါ၌အစားအစာတစ်မျိုးတည်းသည်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ကျန်းမာသောအစားအစာသည်မျှတသင့်သည်ကွဲပြားသည်၊ အလယ်အလတ်ရှိသည်။ သင်သည်ဤ superfoods များကိုထည့်သွင်းပါကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးမှအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မည်။
ဘလူးဘယ်ရီနှင့်တူသောဤအသီးသည် antioxidants များကြွယ်ဝစွာပါ ၀ င်သောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးအရှိဆုံးအသီးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်aíaíဘယ်ရီသီးများလည်းရှိသည် omega 3,6နှင့်9fatty acids ကြွယ်ဝစွာ ကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးပါသောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်စစ် ၎င်း၏ကျန်းမာရေးဂုဏ်သတ္တိများများစွာအနက်açaíဘယ်ရီသီးများသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအားကောင်းစေခြင်း၊ ကင်ဆာကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်ပေးပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်ဟုဆိုကြသည်။
ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်ကြိုးပမ်းနေသူများအားလုံး၏မီးဖိုချောင်များတွင် chia seeds များသည်မီးဖိုချောင်များတွင် ပို၍ ပို၍ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရှိနေသောကြောင့်လူသိများသော superfoods များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျိုးရှိသောဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပြည့်စုံသောအစေ့တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီအက်ဆစ်၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့်အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားစွာပါ ၀ င်သည်။ ဤမျိုးစေ့များသည် အတွက်ကောင်းတယ် အူလမ်းကြောင်းအကူးအပြောင်းနှလုံး၊ ဆီးချို (သို့) ကိုလက်စထရောအခြားသူများများထဲတွင်။
ဤ superfood သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုယူဆနိုင်သည်၊ ၎င်း၏များစွာသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအတွက်အကျိုးအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Matcha လက်ဖက်ရည်သည်ရေနှင့်ရောထားသောလက်ဖက်စိမ်းတစ်မျိုးထက်မပိုပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာအရွက်တစ်ခုလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေရုံသာမကဂုဏ်သတ္တိကိုပါထပ်ဖြည့်သည်။ ဆဲလ်သေများအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသောအစွမ်းထက် antioxidantအခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများစွာတို့တွင်
ဂျင်းမိသားစုမှဆင်းသက်လာသောဤအမွှေးအကြိုင်ကိုသဘာဝရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောအရာဟုယူဆသည်။ နှလုံးအတွက်ကောင်းတယ်၊ အဲဒါကောင်းတယ် ရောင်ရမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်သော၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာအမျိုးအစားအချို့ကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်းတို့တွင်ကောင်းမွန်သည်.
ဒါတွေဟာသူတို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပေမယ့်လူသိများတဲ့အရေးအကြီးဆုံး superfoods အချို့ပါ။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသော်လည်းဤအစားအစာများကိုမျှတသောနည်းလမ်းဖြင့်အစားအစာထဲသို့ပေါင်းစည်းသည်။ သို့မှသာ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအားလုံးပြည့်စုံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါကိုမှတ်မိဖို့အရမ်းအရေးကြီးတယ် ကျန်းမာသောဘ ၀ ၏အခြေခံအချက်များမှာအစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ကျန်းမာသောအလေ့အထများဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » Superfoods တွေကိုသင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်